Medical Writings ဆေးပညာစာများ: Epidural steroid injections side-effects ခါးဆစ်ထဲ (စတီရွိုက်) ဆေးထိုးခြင်း၏ ဘေးထွက်-ဆိုးကျိုးများ
Epidural steroid injections side-effects ခါးဆစ်ထဲ (စတီရွိုက်) ဆေးထိုးခြင်း၏ ဘေးထွက်-ဆိုးကျိုးများ
Mon, Aug 19, 2013 at 4:37 PM
I want to know the side effect of 'Epidural Steroid Injection'.
1. Infection: ပိုးဝင်ခြင်း၊ အလွန်ရှားပါသည်။ ဝ့၅% ထက်နည်းသည်။
2. Bleeding သွေးယိုခြင်း၊ ရှားသည်။ သွေးကျဲဆေးပေးထားသူများမှာသာဖြစ်တတ်။
3. Dural Tears အလွှာစုတ်ခြင်း။ ဖြစ်သွားရင် ခေါင်းကိုက်နေမည်။
4. Increased Blood Sugar သွေးချု-ဆီးချို တက်နိုင်သည်။
5. Allergic reaction ဆေးနဲ့မတည့်ခြင်း။
6. Nerve damage / paralysis အာရုံကြောထိခိုက်ခြင်း အလွန်ရှားသည်။ ဖြစ်ရင် လေဖြတ်နိုင်သည်။
7. Corticosteroid side effects (စတီရွိုက်) ဆေးရဲ့ ဘေးထွက်-ဆိုးကျိုးများ။ weight gain ကိုယ်အလေးချိန်တိုး၊ water retention ကိုယ်ရောင်၊ flushing မျက်နှာနီမြန်း၊ mood swings စိတ်မူပြောင်းလဲ၊ insomnia အိပ်မပျော်၊
Numbness or mild muscle weakness ကြွက်သားအားနည်းခြင်း။ ၈ နာရီကြာဖြစ်နေနိုင်။ 9. Heart disease နှလုံးရောဂါ၊ Diabetes ဆီးချို၊ Rheumatoid arthritis (ရူမက်တစ်) အဆစ်နာရှိနေသူများ၊ Anti-clotting medications ဆေးသုံးနေရသူများဆိုလျှင် သတိထားရမယ်။